निर्मला कि न्यायको बलात्कार ?
सय दिन नाघिसक्यो, बलात्कार र हत्याको पर्दा खुल्न सकेन । सरकारले चाहेन कि हत्यारालाई बचाउनै पर्ने बाध्यता आइपर्‍यो, रहस्यमय घटना बनेको छ, निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरण । यो त साह्रै लज्जास्पद कुरा भयो ओली सरकारका लागि । ओली सरकार सक्षम छ, ढल्ने अथवा कसैले ढाल्नसक्ने सामर्थ पनि राख्दैन । फेरि यति दह्रो र लोकप्रिय सरकारले किन एउटी बालिकाको बलात्कार र हत्या प्रकरण सुल्झाउन सकेन ? देशका सबै समस्याको हल निकाले सुशासन र समृद्धि दिने एजेण्डा बोकेको सरकार यति कमजोर हुनसक्छ र ?
जनमत र जनबल पाएको सरकार कमजोर हुनुहुन्न । जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जनअपेक्षाभन्दा अपराध शक्तिशाली हुनुहुन्न, हुनसक्दैन । बलात्कार र हत्याजस्तो कलंक बोकेर दुई तिहाइको सरकार कसरी चल्न सक्छ ? यसकारण जसरी जनताले अपराधीको पत्तो नलागुन्जेल संघर्ष गर्ने भनेका छन्, सरकारले सक्षम अनुसन्धान गराएर यति गम्भीर कलंकबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
देशैभरि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । देशैभरि बिरोध र मानव सांग्लो बन्न थालेका छन्, अपराधीले दण्डसजाय पाउनुपर्छ भनेर बिरोध भइरहेको छ । सरकारले प्रहरी प्रशासन, गृहमन्त्रालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको असक्षमतामाथि कडाइ गरेर जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नैपर्छ । जनताप्रति जिम्मेवार सरकार गैरजिम्मेवार बनेर ‘बलात्कार र हत्या मैले गरेको हुँ र ?’ भनेर पन्छिन सक्दैन, पन्छिनु पनि हुन्न । नेकपाको सरकार अपराधको पक्षपोषक बन्नैसक्दैन । अपराधलाई टिपेर फाल्ने दायित्व सरकारले निर्वाह गर्नैपर्छ ।
मुख्य सवाल के पनि छ भने राजनीतिमा लागेका, महिला जागरण गरिरहेका, सामाजिक अभियन्ता बनेका, मानवाधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका महिला नेतृहरुले निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डमा जे जति बोल्नुपथ्र्यो, दबाब सिर्जना गर्न लाग्नुपथ्र्यो, त्यो गरिरहेको देखिदैन । अपराधीलाई दण्डको माँग गर्न नसक्नु महिला नेतृहरुको आलोचनाको विषय बनेको छ । आखिर हरेक तह र तप्काका अगुवा महिलाहरु किन मौनता साधिरहेका छन् ? कसरी मौन बस्न सकेको ?
जब महिला नै महिलामाथिको हिंसामा बोल्दैनन् भने कसरी महिला हक र हितको सरक्षण हुनसक्छ ? मेरो आह्वान छ, हामी सबै मिलेर अपराधको बिरुद्धमा लागौं, संचेतना छरौं, सरकारलाई अपराधीमाथि कारवाही गर्न बाध्य पारौं । जो अपराधको विपक्षमा लाग्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई पदमा बस्ने अधिकार छैन ।पचरम गुटबाजी सुरु हुनथाल्यो